WARARKA DIBADA | Bakool.net | Page 2
Home / WARARKA DIBADA (page 2)
Madaxii shaqaalaha Pentagon-ka Kevin Sweeney oo iscasilay, haddaba maxaa looga kala cararayaa maamulka madaxweyne Trump?
Madaxa shaqaalaha wasaaradda Gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka, Kevin Sweeney, ayaa xilka iska casilay, bil kaddib markii Xoghayihii wasaaraddaasi James Mattis uu ku dhawaaqay inuu jagadaas bannaynayo. Admiral Sweeney ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in “la joogo waqtigii saxda ahaa ee uu dib ugu laaban lahaa adeegga gaarka loo leeyahay”. Waa sarkaalkii saddexaad ee sare ee ku ...
Norway Oo 54.3 Milyan Oo Doolar Ku Bixinaysa ib u Dhiska Soomaaliya…
Xukuumadda Norway oo shaaca ka qaaday in lacag dhan 54.3 milyan oo dollar ay ku bixinayso dib u dhiska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya, waxayna sheegtay in dhaqaalahan ay Soomaaliya u soo marinayso Shirkado kala duwan oo hoos taga Bangiga Aduunka. Waxayna intaa raacisay in dhaqaalahan ay ugu tala gashay inay Soomaaliya uga hortagto xad-gudubyada iyo dhibaatooyinka kale ee xagga ...
Ilhaan Cumar Oo Loo Dhaariyay Aqalka Xubin-Nimada Kongareeska Maraykanka..
Ilhaan Cumar oo asal ahaan ka soo jeedda Soomaaliya ayaa si rasmi ah loogu dhaariyay in ay ka mid noqoto Kongareeska Dalka Maraykanka, markii ay November 2018-kii ku guuleysatay Korsiga Degmada 5-aad ee Minnesota. Gabadhan ayaa ah Haweeneydii ugu horreysay ee Xijaaban oo ka mid noqota Aqalka Congresska Dalka Maraykanka, markii ay taageeya badan ka heshay Dadka Muslimka ah oo ...
Trump oo booqasho aan la shaacin ugu tegay ciidammada Mareykanka ee Ciraaq
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo haweeneyda koobaad Melania Trump ayaa booqasho aanan la shaacin waxa ay ugu tageen ciidammada Mareykanka ee ku sugan waddanka Ciraaq. Waxa ay halkaas u safrene “xilli dambe habeenkii loo dabaaldegaayay Kirismas-ka” si ay ciidammada uga mahadceliyaan “adeegooda, guushooda iyo sida ay naftooda u hurayaan”, Aqalka Cad ayaa sidaasi sheegay. Mr Trump ayaa sheegay in Mareykanku ...
Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas’uuliyadda qarax ismiidaamin ahaa oo Talaadadi shalay lala beegsaday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Libyan. Bayaan kasoo baxay kooxdan ayaa lagu sheegay in weerarkaasi oo ay ku dhinteen saddex qof, lala eegtay wax ay ugu yeereen dowladda riddada. Libya ayaa ku jirtay xaalad fowda ah tan iyo marki xakunka laga tuuray hogaamiyihii muddada dheer soo ...
Xog-hayaha Difaaca Mareykanka Jim Mattis oo Is-casiley
Xoghayaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegey inuu shaqada ka tagayo bisha February. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Tweeter-ka soo dhigey inuu howl-gab noqonayo Gen. Mattis bisha February ee sanadka dhalanaya. Balse Gen. Mattis ayaa qoraal uu soo saarey ku sheegey inuu shaqada uga tagayo ka dib markii ay isku aragti noqon waayeen Madaxweynaha. Arrintan waxa ay ku soo beegmeysaa xili ...
Nin bambo gacmeed sitay oo codsaday inuu la kulmo madaxweynaha Faransiiska
Nin ku hubeysnaa bambo gacmeed ayaa codsaday inuu la kulmo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron xilli dalkaasi ay ka socdaan dibadbaxyo. Wuxuu codsanayay in dadka dibadbaxyada dhigayay loo ogolaado inay la kulmaan madaxweyne Macron. Ninkan ayaa lagu xiray galbeedka dalka Faransiiska xilli la arkay isagoo wato bambo gacmeed. Wuxuu qabay dharka dadka dibaxayada dalkaasi ay xirtaan, wuxuu is dhiibay saacado un ...
TRUMP OO BOOQDAY GOBALKA CALIFORNIA OO DAB KA KACAY.
onald Trump Mdaxweynaha dalka maraykanka ayaa booqasho ku tagay gobolka California oo dhawaan uu dab wayni ka kacay kaasi oo sababay dhasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kalena ay ku barakeceen kumanaan shacab ah, Warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya 1,000 qof oo kale in la la’yahay iyada oo mas’uuliyiinta gobolkaasi ay sheegeen tirada dadka dhintay iyo kuwa ...
Waaxda Sirddoonka Mareykanka Oo Ku Eedeeysay Dilka Kaashugji Maxamed Bin Salmaan…
Waaxda sirddoonka Mareykanka ee CIA ayaa rumaysan in dhaxal sugaha Maxamed Bin Salmaan uu kasoo baxay amarka lagu dilay weriye Jamaal Kaashugji, sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka. illo wareedyo ku dhaw waaxdan ayaa faahfaahin ka bixiyay qiimaynta lagu sameeyay caddeymaha la hayo. Waxay sheegeen inaysan garaneynin cidda dambiga gaysatay balse ay filayaan in howlgalka noocaasi ah ee lagu dilay ...
Tirada Dadka Ku Dhintay Dabka California Oo korortay…
Tirada dadka ku dhintay laba dab oo ka ololaya Koofurta iyo Waqooyiga gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa gaartay 66 qof. Saraakiisha gobolka ayaa ku warranay in Khamiisti shalay la helay meydadka 7 ruux oo hor leh, waxaana aad looga baqayaa in tirada dhimashada ay sii kororto maadaama wali la la’yahay boqolaal qof. Khubarrada ayaa sheegaya in dabka sannadkaan ka ...